Kedu otu ị ga - esi mepụta akpa ihi ụra iji dabara maka ọnụego okpomọkụ dị akọwapụtara. - China Green Ngwaahịa ụlọ ọrụ
Kedu otu ị ga - esi mepụta akpa ihi ụra iji dabara maka ọnụego okpomọkụ dị akọwapụtara.
Mgbe ị nwere nro ma ọ bụ RFQ maka akpa ihi ụra, mana onye ahịa gị enweghị nkọwapụta ọ bụla, ha nwere ike ịnye gị ihe achọrọ maka ụdị ọnọdụ akpa ahụ ga-eji ma ọ bụ ebumnuche ọ ga-eji. Kedu otu ị ga - esi mepụta akpa iji dabara maka ebumnuche?
Kedu ihe ga-abụ akụkụ mbụ maka ọnụego okpomọkụ?
Ọ gụnyere ọdịdị mummy, ụdị envelop na mkpuchi. Mydị edozi ahụ dị mma iji rute n'ọnọdụ dị ala, ụdị envelop dị mma na nke dị mma, ma ọ siri ike iru ọkwa dị ala. Iso ihe ndoro ndo di okpukpo okpukpu ala ma dikwa nma dika envelop, ma dikwa nma karia envelop iru ala ovu, ma odighi nma dika mummy iru ogo ala di ala.
Anyị si ugbu a na-ekwu maka owuwu mkpuchi na ihe owuwu ndị ọzọ.
Ihe owuwu ulo
· Naanị 1 oyi akwa. A na-ejikarị ụlọ a eme akpa maka oge ọkọchị ma ọ bụ akpa ụra oge 3.
Construction na - ewu akwa abụọ, nke a na - ejikarị emebe akpa ụra iji dabara maka ojiji ihu igwe oyi. Dabere na ahụmịhe anyị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọtụtụ ndị agha na-ehi ụra akpa na
Ihe owuwu abuo.
• atọ ma ọ bụ karịa n'ígwé, iji ruo otu oke okpomọkụ okpomọkụ, anyị nwere ike ime ka ọtụtụ 4 n'ígwé ụra ugbu a.
Ihe owuwu ndi ozo
A na-edozigharị okpukpo ọkụ n'elu akụkụ akpa ahụ iji kpuchie ikuku dị ọkụ n'ime akpa ahụ.
Ọ na-ejikarị maka akpa ụra ụra mama na-ekpuchi akpa na-ekpuchi ụra.
Efu ikuku na-edozi ya na mkpọchi mkpọ iji gbochie oyi ihu igwe ịbanye n'ime akpa.
Dọka eriri iji mechie oghere ka o kwere omume.
No Achọghị ịma jijiji na shei ahụ iji gbochie ifufe gafere na agịga agịga.
“Ime ụlọ okpukpu abụọ” meziwanye emebi iji gbochie ifufe gafere na agịga agịga. Biko zoo aka na Ajụjụ. https://www.greencampabc.com/faqs/
Kedu ihe ndị a ga-eji akpa akpa na-enwe nnukwu mbọ na ọnụego ya. Ọ gụnyere mkpuchi & shei na mkpuchi.
N'ozuzu, enwere ụdị ihe abụọ eji eme ihe dị ka akpa mkpuchi maka akpa ụra. Otu bụ eriri aka, nke ọzọ adaa. Ala nwere ike iru ala dị ala karịa eriri arụkari na-adabere n'otu olu. Ihe dị iche iche eji arụ arụ nwekwara arụmọrụ dị iche iche.
Shell & akwa mkpuchi
Akpa ọkọchị na-ejikarị akwa dị arọ na akpa ihu igwe oyi na-ejikarị akwa dị nro na nke dị mma, nke dịkwa mma iji nọgide na-ekpo ọkụ.
Ọ nwere ọkọlọtọ mba ụwa niile ịkọwa ọnụego okpomọkụ maka akpa ehi ụra?
E nwere ụkpụrụ ụwa abụọ, EN ISO13537 & EN ISO23537. E mepụtara EN ISO13537 mbụ, EN ISO 23537 bụ ụdị kachasị mma. EN ISO13537 & EN ISO23537 bụ ezigbo nnoo na otu na ma ọkọlọtọ abụọ ndị a bara uru. EN ISO23537 nwere nkọwapụta zuru ezu banyere naanị ule gburugburu. Latestdị kachasị ọhụrụ maka ụkpụrụ abụọ ahụ bụ ISO13537-2012 & ISO23537-2016. Site n'ụkpụrụ abụọ a, anyị nwere ike ịkọwa ọnọdụ dị oke njọ. Kedu ihe kpatara o jiri bụrụ ihe adabaghị nke ọma, maka na onye dị iche nwere mmetụta dị iche. Na iji kọwaa ọkọlọtọ mba ụwa, enwere akụkụ ụfọdụ ezughi ezi uche, dịka usoro nnwale, envelop na mummy dị iche.
Oge nzipu ozi: Jun-10-2020
Mba 168-3, North Qingyang okporo ụzọ, Changzhou, Jiangsu ógbè, China
3600pcs 3 oge na-ehi ụra akpa njikere maka s ...
Otu ụzọ ị ga-esi mechie ụlọikwuu niile-2
Otu ụzọ ị ga-esi pụta ụlọikwuu niile